QORSHAHA TAKOOR LA'AANTA MDA | Minnesota Department of Agriculture
QORSHAHA TAKOOR LA'AANTA MDA
Ogeysiiska Takoorka La'aanta
Waaxda Beeraha ee Minnesota (MDA) ma samayso takoor ku salaysan isir, midab, asal qaran, naafonimo, da'd, jigsiga, ama ahaanshaha shakhsi leh aqoonta Ingiriisi xaddidan (LEP) maamulka barnaamijyadeena ama waxqabadyadeena, oo MDA ma cabsi geliso ama kama aargoosato shaqsi kasta sababtoo ah waxay adeegsadeen xaqa ay u leeyihiin inay ka qayb qaataan adeegsiga xuquuqdooda la ilaalinayo, ama in ay ka soo horjeedsadeen falalka uu mamnuucay, 40 CFR Qaybaha 5 iyo 7 ama ujeeddada faragelinta xuquuqahaas.
MDA waxay mas'uul ka tahay iskudubaridka dadaallada u hoggaansanaanta iyo helitaanka su'aalaha ku saabsan shuruudaha takoor-la'aanta ee ay fuliso 40 CFR Qaybaha 5 iyo 7 (Takoorka la'aanta barnaamijyada ama hawlaha Qaata Kaalmada Federaalka ee ka yimaada Hay'adda Ilaalinta Deegaanka), oo ay ku jirto Title VI of the Civil Rights Act of 1964, sida wax laga beddelay; Qaybta 504 ee Xeerka Rehabilitation Act of 1973; Xeerka Takoorka Da'da ee 1975, Title IX of the Education Amendments of 1972; iyo Qaybta 13 ee Xeerka Xakamaynta Wasakhowga Biyaha ee Federaalka Waxka bedelka 1972 ( hadda wixii halkan ka dambeeya wada jir ah loogu yeerayo shuruucda federaalka ee takoor la'aanta).
Aargoosiga (aarsi) waa mamnuuc
Ma jirto wakaalad, sarkaal, shaqaale, ama wakiilka MDA, oo ay ku jiraan dadka mataleya MDA iyo barnaamijyadeeda, oo cabsin gelin kara, handadi kara, dhibaatayn kara, ku qasbi kara, takoori kari, ama si kale uga aargoosan kara qof kasta oo soo gudbiyay eedayn cabasho ku saabsan takoorid ama ka qaybqaata si uun baaritaan ama dacwad kale oo lagu qaadayo sheegashooyinka takoorid.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan ogeysiiskan ama mid ka mid ah barnaamijyada, xeerarka ama nidaamyada takoor la'aanta ee MDA, waxaad la soo xiriiri kartaa:
Waaxda Beeraha Minnesota
Iskuduwaha Takoor la’aanta
625 Robert St N St. Paul, MN 55155
Haddii aad aaminsan tahay in lagugu takooray barnaamij ama hawl MDA, waxaad la xiriiri kartaa Iskuduwaha Takoorka la'aanta ee kor lagu magacaabay ama soo booqo websaydka MDA si aad u ogaato sida iyo meesha aad ka xaraynayso cabashada takoorka.
MDA waxay hubin doontaa in hababka cabashada ee lagu howgeliyo cabashooyinka takoorka ee lagu xareeyay iyada oo la raacayo qawaaniinta federaalka ee takoor la'aanta in si ballaaran oo caan ah loogu soo daabaco iyo in la geliyo khadka internetka. MDA waxay dib u eegis ku samayn doontaa dhammaan habraacyada cabashooyinka sannad kasta, waxayna wax uga beddeli doontaa hadba sida loo baahdo, si ay ugu ogolaato in si degdeg ah oo caddaalad ah loogu xalliyo cabashooyinka takoorka.
Isku-duwaha Takoorka la'aanta ayaa mas'uul ka ah isku-dubbaridka iyo kormeerka nidaamka cabashooyinka.
Haddii aad aaminsantahay in lagaa saaray ka-qaybgalka, laguu diiday nacfiyada barnaamijyada, adeegyada, iyo hawlaha codsadayaasha ama qaatayaasha kaalmada maaliyadeed ee federaalka iyadoo lagu salaynayo isirkaaga, midabkaaga, asalkaaga qaranka, naafanimadaada, da'daada, jinsigaaga, ama inaad tahay shakhsi leh aqoon Ingiriisi xaddidan (LEP), iyo/ama in aad aaminsan tahay in lagugu sameeyay takoor, caga-jugleyn, iyo/ama dhibaatayn ku salaysan xaaladaha kore, waxaad u gudbin kartaa cabasho takoor iskuduwaha takoor la'aanta.
Haddii cabashada takoorka ee ku saabsan barnaamijyada ama adeegyada MDA aan lagu xallin karin si aan rasmi ahayn, (iyada oo loo marayo ka wada hadal, qoraal, iyo/ama af ahaan ah) qofka cabanaya ayaa wuxuu cabasho rasmi ah u gudbin karaa Isuduwaha Takoorka La'aanta isagoo isticmaalaya hababka soo socda.
U soo dir cabashada Iskuduwaha Takoorka La'aanta ugu dambayn 180 maalmood laga bilaabo taariikhda ay dhacday eedaynta takoorku.
Foomka Cabashada waxa lagu heli karaa adiga oo soo wacaya 651-201-6000 oo waydiisanaya foomka in laguu soo diro ama adiga oo foomka ka soo dejinaya websaydka MDA. Macluumaadka soo socda ayaa looga baahan yahay in uu ku qoranyahay foomka cabashada, ama waxaad soo gudbin kartaa bayaan qoraal saxeexan ah oo ka kooban dhammaan macluumaadka soo socda oo qoran:
Magacaaga, cinwaankaaga, iyo sida laguula soo xiriiro (lambarka taleefanka, cinwaanka emailka, iwm.)
Taariikhda(taariikhaha) ay dhaceen dhacdada(dhacdooyinka) takoorka lagu eedeeyay
Bayaan qeexaya sida, sababta, goorta, iyo meesha aad aaminsan tahay in lagaa reebay in aad ka qaybgasho, laguugu diiday nacfiyada, ama lagugu sameeyay takoor, ku salaysan isir, midab, asal qaran, naafonimada, da'da, jinsiga, ama shakhsi ahaan leh aqoon Ingiriisi oo xaddidan (LEP)
Goobta, magacyada, iyo macluumaadka xiriirka ee markhaati kasta oo dhacdada(dhacdooyinka) takoorka ah
Haddii cabashada loo gudbiyay wakaalad ama maxkamad kale, ku soo dar wakaalada ama maxkamada meesha laga xareeyey oo uu la socdo magaca xiriirka
Saxeexaaga ama saxeexa wakiilkaaga
Haddii qofka cabanayaa uuna awoodin in uu qorto cabasho, Iskuduwaha Takoor La'aanta waa in lala xiriiro si loo helo caawimo dheeraad ah. MDA waxaa ka go'an in ay u fidiso adeegyadeeda dadka leh aqoonta Ingiriisiga xaddidan (LEP) ama naafanimada.
Cabashada saxiixan ee taariikhaysan waa in lagu soo diro:
625 Robert St N. St. Paul, MN 55155
Waxaad sidoo kale ugu soo diri kartaa cabashada fakix ahaan 651-201-6118 ama email Sabrenia.Young@state.mn.us. Waa in aanu haysanaa nuqul saxeexan oo cabashadaada ah, haddii aad cabashadaada ku soo dirto email, hubi inaad ku soo lifaaqdo nuqulka saxeexan emailkaaga. Macluumaadka aan dhamaystirnayn ama foomka aan la saxeexin ayaa dib u dhigi doona howlgelinta cabashadaada.
Warqad cadeyneysa in la helay cabashada waxaa loo soo saari doonaa qofka cabanaya shan maalmood oo shaqo gudahooda marka la helo cabashada.
Cabashooyinka waxaa loo baari doonaa si degdeg ah oo cadaalad ah; badnaanta caddaymaha la hayo ayaa lagu dabaqi doonaa inta lagu jiro gorfaynta cabashada.
Tallaabooyin macquul ah ayaa la qaadi doonaa si loo ilaaliyo macluumaad kasta oo sir ah.
Iskuduwaha Takoorka La'aanta ayaa dib u eegi doona cabashada oo waxaana laga yaabaa inuu macluumaad dheeraad ah ka weydiiyo cabashada. Haddii macluumaadka dheeriga ah la codsado oo aan lagu helin 30 maalmood gudahood, kiiska waxaa laga yaabaa in la xiro. Kiiska waxa kale oo laga yaabaa in la xiro haddii qofka soo dacwooday uuna doonayn in uu sii wado kiiska.
Kiisaska ay cabashadu ka dhantahay/laga gudbiyey mid ka mid ah dadka qaatayaasha hoos yimaada MDA, Iskuduwaha Takoor la'aanta ayaa wuxuu siin doonaa cidda laga dacwoonayo fursada in uu kaga jawaabo eedaymaha qoraal ahaan. Jawaabceliyuhu/eedaysanaha ayaa wuxuu haystaa 10 maalmood laga bilaabo taariikhda ogaysiinta qoraalka ah ee MDA ee aqbalaada cabashada ah in ay ku soo gudbiyaan ka jawaabidooda eedeymaha. Iskuduwaha Takoor La'aanta ayaa daba-geli doona oo baaridoona macluumaadka lagu bixiyay jawaabta sida ku habboon ee ku khusaysa.
Ogeysiis qoran ayaa isla markiiba lasoo saari doonaa oo ku saabsan natiijada baaritaanka, oo ay ku jiraan in takoorid la helay iyo sharraxaadda habka baaritaanka.
MDA waxay xaqiijinaysaa in caga-juglaynta iyo aargoosigu ay mamnuucyihiin iyo in sheegashada in la sameeyey caga-jugleyn iyo aargoosiga loo maarayn doono si degdeg ah oo cadaalad ah iyada oo la raacayo habraacyada cabashooyinkeena si la mid ah sheegashooyinka kale ee takoorka.
Qaybta Hoose ee Foomka
Qorshaha Ka-qaybgalka iyo Howlgalinta Dadweynaha
MDA waxay hubin doontaa in qorsheheeda ka qaybqaadashada dadweynaha iyo ka qaybgelinta ay heli karaan dhammaan dadka iyada oo aan loo eegin jinsiyad, midab, asal qaran, oo ay ku jiraan aqoonta Ingiriisiga ee xaddidan (LEP), da'da, naafanimada, jinsiga, ama isticmaal hore ee xuquuqda ama ka soo horjeedka tallaabooyin laga mamnuucay sharciyada federaalka takoorid la'aanta; iyo in la hubiyo in qodobada lagu go'aaminayo waqtiga, goobta, goobta, muddada iyo amniga ku habboon shirarka dadweynaha in lagu dejiyo oo lagu dhaqmo si aan takoor lahayn oo aan wax kharash ah ku joogin ka qaybgalayaasha.
MDA waxay siisaa waxyaabo badan oo adeegyo ah beeralayda iyo macaamiisha Minnesota. Shaqada aynu qabano ayaa waxay taabataa nolosha qof kasta oo reer Minnesota ah, maalin kasta.
Hadafka MDA waa in kor loo qaado tayada nolosha dhammaan dadka Minnesota iyadoo si siman loo hubinayo hufnaanta adeegyada cuntada, caafimaadka deegaankeena, iyo xooga iyo adkeysiga dhaqaalaheena beeraha.
MDA waxa ay sii wadi doontaa in ay xooga saarto ka qayb galinta maamulka MDA ee ka qaybgalka iyo qorshaha ka qaybgalinta dadweynaha iyadoo dib u eegis iyo tababaro sanadle ah lagu samayn doono.
MDA waxay had iyo jeer tixgalin doontaa u fududaynta naafada iyo qaabilaada ee dhammaan la falgalka dadwaynaha. Marka MDA ay leedahay kulanno shaqsi ahaan loo imaanayo waxay la shaqayn doonaan shuraakada bulshada si ay u hubiyaan in goobuhu yihiin kuwo ammaan ah oo loo heli karo oo ay soo geli karaan (iyada oo la tixgelinayo baarkinka, helitaanka gaadiidka) dhammaan xubnaha bulshada oo ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha u fududaynta naafada iyo baahiyaha helitaanka LEP.
MDA waxay ku dhiiri gelinaysaa ka qayb galka dadwaynaha waxaanay siin doontaa ogaysiis ku filan dadweynaha oo ku saabsan barnaamijyada, aqoon iswaydaarsiga, iyo shirarka hadba sida loogu baahdo oo lagu soo dhejinayo websaydkeena www.mda.state.mn.us iyo baraha bulshada ee MDA (Facebook, Twitter @mnagriculture). MDA waxay ku soo dhejisaa dhammaan dukumeentiyada dadwaynaha u furan websaydka si bulshada u eegto ooay u tixraacdaan.
Dhammaan isgaarsiinta MDA waxaa ku jiri doona macluumaadka ku xiriirinaya shakhsiyaadka naafada ah iyo shakhsiyaadka LEP Sabrenia Young, Iskuduwaha Takoor La'aanta, si ay u helaan u fududaynta baahiyaha. MDA waxay hubin doontaa in isgaarsiinta muhiimka ah lagu bixiyo luqadaha caanka ah ee LEP (dadka yaqaana Ingiriisi xaddidan), hadba sidii loogu baahdo iyo in qalabka u fududaynta naafada lagu bixiyo lacag la'aan.
Qorshaha MDA ee si loo hubiyo Helitaanka Macnaha leh ee Barnaamijyada iyo Hawlaha loogu talagalay Dadka leh Aqoon Ingiriisi xaddidan (LEP) iyo Naafonimada
MDA waxa ay samaysay, shaacisey, oo ay fulisay habab qoran si loo hubiyo helitaan macquul ah ee dhammaan barnaamijyada iyo hawlaha MDA in ay helaan dhammaan dadku, oo ay ku jiraan helitaan la siiyo dadka aqoonta Ingiriisiga xaddidan (LEP) iyo shakhsiyaadka naafada ah iyada oo aan wax kharash ah laga qaadaynin shakhsiyaadkaas.
Qorshaha Aqoonta Ingiriisiga ee xaddidan (LEP).
MDA waxay haysan doontaa qorshe loogu talagalay dadka leh aqoonta Ingiriisiga ee xaddidan kaas oo u adeegi doona gobolka Minnesota oo dhan.
Midkasta oo ah barnaamij, adeeg, ama kulan oo lagu dabaqi karo, falanqayn gaar ah oo gaar ah ayaa la samayn doonaa si loo go'aamiyo habka ugu kharashka badan ee lagu gaarsiinayo adeegyada luqadda hufan iyo saxda ah ee dadka LEP haddii loo baahdo.
Falanqaynta afar qodob ee LEP ayaa la sameeyay, kaas oo hoos lagu soo koobay. Natiijooyinka falanqaynta afarta-qodob ah ee LEP waxay MDA ka caawin doontaa horumarinta qorshaha dadka aqoonta Ingiriisiga xaddidan kaas oo wax ka qaban doona baahiyaha la aqoonsaday ee dadka ay LEP u adeego. MDA waxay samayn doontaa gorfayn afar qodob ah oo bulshada ay khusayso dhexdeeda ah halkaas oo MDA ay ku qaban doonto barnaamij dadweyne ama howl.
Gorfaynta afarta qodob ee soo socota ah ayaa la eegi doonaa si loo go'aamiyo heerka iyo inta ay le'eg tahay kaalmada luqadu: (1) tirada ama saamiga dadka LEP ee loo adeego ama ay u badan tahay inay la kulmaan barnaamijka, adeegyada, ama kulanada MDA; (2) inta jeer ee ay shakhsiyaadka LEP la kulmaan barnaamijyada, adeegyada, ama kulanada MDA; (3) nooca iyo muhiimada barnaamijka, adeega, ama kulanka; (4) khayraadka ay heli karaan adeeg qaataha iyo kharashyada la xiriira.
Qodobka #1: Macluumaadka Dadweynaha (oo ay qabatay Xarunta Macluumaadka Dadweynaha ee Gobolka Minnesota)
Xafiiska Tirakoobka Maraykanka ayaa diiwaangeliya aqoonta luqadda ee shakhsiyaadka da'doodu tahay 5 sano iyo wixii ka weyn. Qiyaastii ugu dambeysay (Sahaminta Bulshada Mareykanka 2019), qiyaastii 4.4% dadweynaha 5 sano iyo ka badan waxay kaga hadlaan luqad aan Ingiriisi ahayn guriga waxayna ugu hadlaan Ingiriisiga wax ka yar "si aad u wanaagsan." 5,290,011 qofood ee gobolka degan ee da'doodu tahay 5 sano jir iyo ka weyn, 4.4% ayaa waxay qiyaas ahaan noqonaysaa 232,760.
Iyada oo ku salaysan xogta ugu dambaysay ee la hayo, qiyaastii 2.4% (ama 52,641) ee dadka reer Minnesota ayaa waxay ku noolyihiin guri lagaga hadlo Ingiriisi xaddidan. Saddexda qaybood ee luqadaha ugu badan ee lagaga hadlo guryaha Ingiriisigoodu xaddidanyahay ee Minnesota waa Isbaanishka (16,522), luqado kale oo aan cayimnayn, oo ay ku jiraan luqadaha Afrikaanka (13,968), iyo luqadaha kale ee Aasiya iyo Jasiiradaha Baasifigga (7,513).
Qodobka #2: Inta jeer
MDA waxay sameyn doontaa dib u eegis sanadle ah, sida ugu saxda ah ee suurtogalka ah, taas oo ku saabsan inta jeer ee dadka LEP ee ka socda kooxaha luqadaha kala duwan ay la xiriiraan barnaamijyada, adeegyada, ama shirarka MDA. Ilaa hadda, ma jirto maclumaad arrintan ku saabsan.
Qodobka #3: Muhiimada
MDA waxay fahansantahay muhiimada ay leedahay dejinta qorshaha LEP. MDA waxay ogtahay muhiimada ay leedahay samaynta dib u eegis sanadeed si loo hubiyo in qorshaha LEP laga faa'iidaysayo.
Qodobka # 4: Khayraadka/ilaha
MDA waxa ay qandaraas la leedaday adeeg bixiyeyaal kala duwan si ay u bixiyaan adeegyada luqada ee lagama maarmaanka u ah guusha wakaalada ee qorshaha LEP.
Turjumaada iyo Turjumaada hadalka iyo qoraalka luqadaha Ajnabiga ah: MDA waxay kala shaqayn doontaa shirkadaha ku jira liiska ay dawladu ansixisay ee tarjumaada qoraalka iyo turjumaada hadalka, iyadoo bixinaysa adeegyo turjumaada qoraal iyo afka ah. MDA waxay u isticmaali doontaa adeegyadan hadba sidii loogu baahdo.
Dhammaan alaabada qoran, elegtarooniga ah, ama warbaahinta badan ee loogu talagalay in loo qaybiyo dadweynaha, ee ay samaysay, adeegsato, ama qaybiso MDA, ayaa waxaa ku jiri doona bayaan tilmaamaya in macluumaadka loo tarjumi karo shakhsiyaadka leh LEP marka la codsado, si wakhtiga ku habboon.
MDA waxay samayn doontaa dib u eegis sanadle ah si loo hubiyo in tababar ku haboon la siiyo shaqaalaha MDA si loo hubiyo inaan qaabilayno shaqsiyaadka leh LEP. MDA waxay ogeysiin doontaa dadweynaha in adeegyada luqada lagu heli karo lacag la'aan ciddii codsata. War isgaarsiintan waxa lagu bixin doonaa qoraaladeena, soo dhajinta (warbaahinta bulshada), iyo websaydka MDA.
MDA waxay mas'uul ka tahay iskudubaridka dadaallada u hoggaansanaanta iyo helitaanka su'aalaha ku saabsan shuruudaha takoor-la'aanta ee ay fuliso 40 CFR Qaybaha 5 iyo 7 (Takoorka la'aanta barnaamijyada ama hawlaha Qaata Kaalmada Federaalka ee ka yimaada Hay'adda Ilaalinta Deegaanka), oo ay ku jirto Title VI of the Civil Rights Act of 1964, sida wax laga beddelay; Qaybta 504 ee Xeerka Rehabilitation Act of 1973; Xeerka Takoorka Da'da ee 1975, Title IX of the Education Amendments of 1972; iyo Qaybta 13 ee Xeerka Xakamaynta Wasakhowga Biyaha ee Federaalka Waxka bedelka 1972 (hadda wixii halkan ka dambeeya wada jir ah loogu yeerayo shuruucda federaalka ee takoor la'aanta).
Dhammaan macluumaadka qoran, elegtarooniga ah, ama warbaahinta badan ah (multimedia) ee ay samaysay, adeegsatay, ama ay qaybisay MDA ee loogu talagalay in loo qaybiyo dadweynaha ayaa waxaa ku jiri doona bayaan tilmaamaya in macluumaadka loogu heli karo qaabab beddelaad ah shakhsiyaadka naafada ah marka la codsado. Qaabka kale oo beddelaad ah ayaa lagu bixin doonaa doonaa wakhti ku haboon. MDA waxay ku bixin doontaa macluumaadka wax ka badan hal qaab oo beddelaad ah iyadoo ku xiran baahida.
Turjumaada Luqadda Calaamadaha: MDA waxay u heellan tahay bixinta adeegyada wada hadalka oo tayo leh ee loogu talagalay dadka maqalka naafada ka ah. Gobolka Minnesota wuxuu qandaraas kula jiraa ASL Interpreting Services, Inc. si ay u bixiyaan turjubaano anshax iyo xirfad leh. Helitaanka adeegyada luqada waxaa lagu gudbiyaa iyada oo loo marayo Qorshaha Fursadaha Loo Simanyahay ee MDA kaas oo laga heli karo websaydka MDA.
Marka lagula xiriirayo dadweynaha guud taleefoon ahaa, MDA waxay hubin doontaa in isgaarsiinta si isku mid ah oo waxtar u leh loogu heli karo dadka dhegaha la', dhegaha-indhaha la'a, maqalku ku adagyahay, ama hadalka naafada ka ah iyadoo la siinayo isgaarsiin.
Bayaanka soo socda ayaa lagu soo dari doonaa dhammaan qalabka cusub iyo kuwa hadda jira:
Iyada oo la raacayo Sharciga Maraykanka ee Naafonimada, macluumaadkan waxaa lagu heli karaa qaabab isgaarsiin oo beddel kale ah marka la codsado iyada oo la soo wacayo 651-201-6000. Dadka isticmaala TTY waxay soo wici karaan Adeegga Minnesota Relay Service 711. MDA waa loo shaqeeye iyo bixiye fursad loo wada siman yahay.
Kahor inta aan la qaban shirka, MDA waxay waydiin doontaa in ka qaybgalayaashu ay u baahanyihiin u fududayn macquul ah, caawimo dheeraad ah, ama qalabka oo ku qoran qaabab kale.
Kulamada dadweynaha ama dhacdooyinka ay qabato MDA waxa lagu qaban doonaa meel buuxinaysa shuruudaha Xeerka Dhismaha Gobolka ee la xiriira u fududaynta dadka naafada ah.
MDA kuma soo dalaci doonto shakhsiga naafada ah ama kooxda shakhsiyaadka naafada ah kharashka bixinta bedelaada u fududayn macquul ah.
MDA ma ogolaan doonto caga-juglaynta ama aargoosi ka dhan ah shakhsi naafo ah ama koox ka mid ah shakhsiyaadka naafada ah in ay codsadeen u fududayn, u beddelaad, ama gargaar ama caawimo ama adeegyo iyaga oo matalaya naftooda ama cid saddexaad; ama qofka soo sheega xadgudubyada hoos yimaada xeerkan, cidda xaraysa dacwad ama cabasho la xiriirta xeerkan ama Title II ee ADA, ama ka qaybqaata baaritaan ama dacwad la xiriirta.
cabashada takoorka barnaamijka MDA foomka